रोचक - Radio Kantipur
नारायण खड्का , श्रावण २३, २०७५
पाईलाई स्ट्रेस भयो वा केही कुरामा तनाव सृजना भयो ? के गर्नुहुन्छ ? चुप लागेर बस्नुहुन्छ, संगीत वा एकान्तको सहारा लिनुहुन्छ अथवा मेडिटेसन गर्नुहुन्छ ? तर अष्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न लगायतका शहरमा भने गज्जबको उपाय निकालिइएको छ । ‘ब्रेक रुम’ जानुस । जे जे सामान फुटाउन राखिएको छ । तोड्नुस, फुटाउनुस र आफुलाई हलुका बनाउनुस् ।
एडमण्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेको ६५ वर्ष पुगेको छ । सगरमाथा आरोहणको सम्झनामा सगरमाथा दिवस मनाउने गरिएको छ । सगरमाथा आरोहणको ६५ वर्ष पुरा भएपनि बिभिन्न चुनैतीका कारण कुल ८ हजार ३ सय ६ जना मात्र शिखरको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् ।
मानव आकृति भएको रोबोट सोफिया नेपाल आउने भएकी छिन् । साउदी अरब सरकारबाट नागरिक घोषणा भएसँगै नागरिकता पाएकी सोफीयाले काठमाडौंमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने छिन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपी सहित अन्य साझेदारले आयोजना गरेको सार्वजनिक सेवामा प्रविधि सम्मेलनमा सोफियाले मन्तब्य दिने छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा देउवा विजयी
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी हुनुभएको छ । आज भएको मतदानमा देउवाले ४४ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका प्रतिष्पर्धी नेता प्रकाशमान सिंहले १९ मत ल्याउनुभयो ।
पपुवा न्यू गिनीमा भेटिएको खप्पर सबैभन्दा पुरानो सुनामी पीडितको
पपुवा न्यू गिनीमा फेला परेको मानव खप्पर विश्वमै सबैभन्दा पूरानो सुनामी पीडितको हुनसक्ने बैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन् । ऐटेप शहरमा सन् १९२९ मा फेला परेको सो खप्पर मानव जातीकै पूर्खाको भएको हुनसक्ने बैज्ञानिकहरुको अनुमान छ ।
सम्बन्ध विच्छेदको कारक परेवा !
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, मायाको प्रतिकका रुपमा लिइने परेवालाई एउटा देशमा सम्बन्ध विच्छेदको कारक मानिएको छ । इन्डोनेशियाको जाभा प्रान्तमा सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढ्नुमा एउटा कारक पक्ष परेवालाई लिइएको हो ।
विमल खतिवडा, वैशाख ३, २०७४